Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘प्रसाद’ को अफिसियल ट्रेलर रिलिज – Emountain TV
‘प्रसाद’ को अफिसियल ट्रेलर रिलिज
काठमाडौं, १७ कात्तिक । ‘लै लै’ बोलको गीतका कारण चर्चामा रहेको अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र अभिनेता विपिन कार्की स्टारर फिल्म ‘प्रसाद’ को अफिसियल ट्रेलर इन्टरनेट रिलिज भएको छ ।
निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतको पनि प्रमुख भूमिका रहेको फिल्मको ट्रेलर शुक्रवार नेपाल आइडलमार्फत् रिलिज गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशक दिनेश राउत र अभिनेता बस्नेत पुगेका थिए । निःसन्तानका कारण पति र पत्निबीचमा आउने असमझदारी, अविश्वास तथा आफैंमा उत्पन्न एक मानसिक द्वन्द्वसँगै सामाजिक मुल्य-मान्यता विरुद्धको कथा फिल्मले बोल्छ ।
सन्तान नहुँदा श्रीमान-श्रीमतीबीच उत्पन्न हुने मनमुटावलाई ट्रेलरमा देखाइएको छ । विपिन र नम्रताको बैबाहिक जीवनमा अभिनेता निश्चल भिलेन बनेका छन् । ट्रेलरबाट निर्देशक राउतले मूलकथा प्रस्टाउन खोजेका छन्, जसले दर्शकलाई हलसम्म तान्न बाध्य बनाउन सक्छ । ट्रेलर हेर्दा फिल्मको कन्टेन्ट बलियो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मंसिर २१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने ‘प्रसाद’ लाई पत्रकार सुशील पौडेलले लेखेका हुन् । सुवाष थापा इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा बनेको ‘प्रसाद’ लाई राजेश श्रेष्ठले खिच्नेका हुन् । लोकेश बज्रचार्यको सम्पादन रहेको फिल्ममा विकास सुवेदी सह-निर्देशकका रुपमा छन् ।
सुवाष र कोशिष क्षेत्रीको पनि संगीत रहेको फिल्ममा हिमाल केसीको थ्रिल छ । शिव विकको कोरियोग्राफी रहेको फिल्मलाई उज्जवल पौडेल, मनोज राठी र गोविन्द शाहीले मिलेर वितरण गर्दैछन् । फिल्मको दोस्रो गीत ‘बनकी चरी’ ले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ ।